DHAGEYSO Saraakiisha amaanka oo ka hadlay amniga magaalada Baydhabo. – The Voice of Northeastern Kenya
DHAGEYSO Saraakiisha amaanka oo ka hadlay amniga magaalada Baydhabo.
Taliska Booliska Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa faah faahin ka bixiyeen xaaladaha Amni ee deegaanada Maamulkaas gaar ahaan Magalada Baydhabo oo dhawaan lagu wado inay ka dhacdo doorashada Madaxweynaha Koonfur Galbeed.
Taliyaha Ciidanka Booliska Koonfur Galbeed Korneel Mahad Cabdiraxmaan Aadan ayaa sheegay in xaalada amni ee Magalada Baydhabo ay aad u wanagsantahay ciidamaduna ay ku dadaalayaan inaysan dhicin wax amniga dhib u keeni kara.
Guud ahaan deegaanada maamulka Koonfur Galbeed ayuu shegay in amnigooda uu hagaagsan yahay,isla markaana Ciidamada amaanka Dowladda iyo kuwa Koonfur Galbeed ay dagaal kula jiraan ururka Al-Shabaab ee deegaanada qaar wali ku sugan.
Hadalka Taliyaha Ciidanka Booliska Koonfur Galbeed ayaa ku soo aadaya xilli dhawaan la filayo in Magalada Baydhabo lagu qabto doorashada Madaxweynaha Koonfur Galbeed,isla markana ay ku sugan yihiin musharixin dhowr
← DHAGEYSO Howlgalo amaan oo xalay laga sameeyay xaafado katirsan degmada hiliwaa.
Booliska Nairobi oo toogtay 6 qof oo burcad ah →